Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-IATA ichaza iNgcali entsha yezoQoqosho
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-IATA ikhankanya iNgcali entsha yezoQoqosho.
UMarie Owens Thomsen uza kujoyina i-IATA njengeNgcali yezoQoqosho eyiNtloko ukususela nge-4 kaJanuwari 2022.
U-Owens Thomsen uya kuvela eBanque Lombard Odier, apho usebenze njengeNtloko yeGlobal Trends kunye noZinzo.
U-Owens Thomsen une-PhD kwi-Economics yaMazwe ngaMazwe evela kwi-Graduate Institute e-Geneva kunye ne-MBA elingana neYunivesithi yaseGothenburg kuQoqosho lwaMazwe ngamazwe kunye neShishini.
Ubambe i-US, i-UK kunye nezizwe zase-Swiss, usebenze e-UK, eFransi naseSwitzerland kwaye uthetha kakuhle isiSwedish, isiNgesi nesiFrentshi.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) ubhengeze ukuba uMarie Owens Thomsen uza kujoyina uMbutho njengeNgcali yezoQoqosho eyiNtloko ukususela ngomhla wesi-4 kuJanuwari wama-2022.
U-Owens Thomsen uya kuvela e-Banque Lombard Odier, apho usebenze njengeNtloko ye-Global Trends kunye noZinzo ukususela ngo-2020. Ngaphambi koko wayeyiNtloko ye-Global ye-Intelligence Intelligence Intelligence (2011-2020) yexesha elide kwi-Indosuez Wealth Management. Ukongeza, usebenze kwi-Chief Economist kunye neendima ezinxulumene neMerrill Lynch, Dresdner Kleinwort Benson kunye neHSBC. Imisebenzi yakhe eyahlukeneyo ikwabandakanya ushishino kunye nemisebenzi yophuhliso lwemarike.
“Umsebenzi kaMarie kwimiba yoqoqosho olukhulu egxile kuzinzo uya kumlungiselela ukujongana nemiba ephezulu yezophapho—eyile, ukuchacha kwi-COVID-19 kunye nokuzinza. Ephuma ngaphandle kwecandelo lezophapho, uza kuzisa iimbono ezintsha ezixabisekileyo kunye neembono. Kwaye ndiqinisekile ukuba uzakuqhubeka nodumo lwe-IATA lokunika ingxelo enenjongo kunye nohlalutyo oluyimfuneko ekuchazeni igalelo lenqwelomoya kuqoqosho lwehlabathi kunye nokukhuthaza iinqwelomoya zeenqwelo moya kufuneka ziphumelele, ”utshilo. UWillie Walsh, uMlawuli-Jikelele we-IATA.
Ndiyajoyina IATA ukufaka igxalaba kwicandelo lezophapho ebelingumqhubi wexesha elide wohlumo loqoqosho. Ndiya kukwenza oku ngendlela yophando echonga izinto ezibangela imiba ebalulekileyo kunye nezisombululo zabo eziphambili. Oku kubalulekile njengoko inqwelomoya iqala ukuchacha kwi-COVID-19 kwaye iqhubeleka nohambo lokukhupha izinto ezikhutshwayo. Ndijonge phambili kwikamva apho iinqwelomoya ziya kuchuma kuqoqosho oluzinzileyo lwehlabathi,” utshilo u-Owens Thomsen.
U-Owens Thomsen une-PhD kwi-Economics yaMazwe ngaMazwe evela kwi-Graduate Institute e-Geneva kunye ne-MBA elingana neYunivesithi yaseGothenburg kuQoqosho lwaMazwe ngaMazwe kunye noShishino. Ubambe i-US, i-UK kunye nezizwe zase-Swiss, usebenze e-UK, eFransi naseSwitzerland kwaye uthetha kakuhle isiSwedish, isiNgesi nesiFrentshi.
U-Owens Thomsen ungena esikhundleni sikaBrian Pearce oye wathatha umhlala-phantsi kwi-IATA ekuqaleni kwalo nyaka emva kokusebenza njenge-Chief Economist ukususela ngo-2004.